Masiriin 'suura qullaa bakka Piraamiidiisheetti ka'ame' qorachaa jirti - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Piraamiidiin Guddichi Giizaa keessatti argamu kun wantoota ajaa'iboo addunyaa kan bara durii torba jiran keessaa isa tokkodha
Masiriin viidiyoo dhirsaafi niitiin lammii Deenmaarkiirraa ta'an yeroo Piraamiidii Guddicha ol-bahanitti qullaa ofii isaanii waraabanii gadi dhiisan agarsiisu qorachaa akka jirtu beeksifte.
Waanti ta'e jedhame kun biyya safuu amantaa Musiliimaa qabdu akka Masirii keessatti mormii hedduu kaaseera.
Abbaan alangaa viidiyoon kun dhuga ta'uu isaa qorachaa kan jiru yommuu ta'u yoo viidiyon waraabame kun dhugaa ta'e akkamitti waanta hanga kanaa dheeratu (meetira 140) koruu akka danda'anis ilaaluuf akka jiru gaazexaan abbaan qabeenyummaa isaa kan mootummaa ta'e Al-Ahram gabaaseera.
Siidaa Mo Saalaah namoonni itti qoosan
Aanga'oonni yeroo jalqabaa viidiyoon waraabame kun soba ta'uu mala jedhanii turan.
Piraamiidiin Guddichi Giizaatti argamu kun maqaa Khufu or Cheops jedhuun kan beekamu yommuu ta'u waan durii keessaa wantoota addunyaa kana irraa ajaa'iboo ta'an torba keessaa isa tokkodha.
Namichi ogeessa suuraa viidiyoon isaa jaalallee/haadha warraa isaa waliin mul'ate kun osoo Piraamiidicha hin koriin "hedduu wal'aansoo qabaa akka turan" dubbata.
Ministirri Aadaafi Ambaalee Dilbata darbe akka miseensota paarlaamaatti himetti abbaan alangaa dhirsaafi niitiin lammii Denmaaki ta'an kun fiilmii kan viidiyoo saalqunnamtii ifatti mul'isu bakka akka addunyaatti beekamaa ta'e Giizaatti waraaban yoo ta'eef jecha qorachaa jiru.
Khaled al-Anani, akka Al-Ahram'tti dubbatetti viidiyoob kun dhugaafi sobaan isaa sakatta'amee aanga'oonni dhibaa'ummaadhaan yeroo akka kun ta'u callisanii dhiisan himachuudha.
Piraamiidii kana koruun "baayyee dhorkaadha" kan jedhan aanga'aan kun waanti amma achiratti waraabamee gadi dhiifame kun ammoo "Safuu hawwaasaa cabsuudha" jedhan.
Viidiyoon sun maal agarsiisa ture?
Viidiyoon daqiiqaa sadii dheeratu gulaalame kun ogeessa kaameraa lammii Denmaarkiin kan YouTube irratti fe'ame kun yeroo dubartiin tokko piraamiidii akka addunyaatti isa guddicha jedhame Giizaatti argamu kana yeroo kortu agarsiisa.
Suura dhirsaafi niituu kanaas kan qabu ta'ee fuulli dubartittii akka sirriitti hin mullannee dimisimiseera. Suurichi yeroo piraamiidii waggaa 4,500 ture kana gubbaa wal cinaa yeroo dhaabbatanitti agarsiisa.
Dhuma isaa irratti yeroo dubartiin kun magaalaa Kaayiroo gadi ilaaltu dugda isheerraan agarsiisa ture.
Ogeessi suuraa kun fakii yeroo aduu guyyaa qullaa isaanii piraamiidicharra waliin ciisanis agarsiisera.
Namoonni akkamitti ilaalan?
Viidiyoofi suurri akka malee midiyaalee hawwaasummaa iratti torban darbe tatamsa'ee ture kun Masiriifi biyya birootta hedduu akka haarsedha. Namoonni hedduunis gacha akkasii kana abaaranii seenaafi qabeenya Masiriitiif kabaja dhabuudha jedhan.
Feesbuukii irratti viidiyoo kanaaf yeroo deebii kennitu dubartiin tokko akkas jette: "Kun qaanii guddaadha. Kun amala biyya biraaf dhabuudha, aadaa biraaf kabaja dhabuudha, jireenya akkataa biraa namni fedhu kabajuu dhiisuudha.... Kun amantiifi aadaa namoota biroo kabajuu irratti hubannaa dhabuudha."
Namoonni Denmaarkirraa ta'anis akkasuma dhimma kana qeeqaniiru.
Gaggeessaan mana mree godambaa Masirii, Mostafaa al-Wazirii, suurriifi viidiyoon kun tarii sooftiwaarii suura gulaaluun kan uumame ta'uu mala jechuun gaazexaa al-Masry al-Youm gabaaseera.
Mo Salah: Siidaan taphataa collee Liivarpuul Masiriitti tolfame
Dubartiin onnee sa'aatii ja'aaf dhaabate deebitee lubbuun jiraatte